काठमाडौंको चुनावः माओवादी जमानत जफत, उम्मेदवारले हालेनन् आफैंलाई भोट. – Sabaikoaawaj.com
काठमाडौंको चुनावः माओवादी जमानत जफत, उम्मेदवारले हालेनन् आफैंलाई भोट.
मङ्लबार, जेष्ठ १६, २०७४ 7:14:12 AM	मा प्रकाशित
काठमाडौं,१६ जेठ / काठमाडौं महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रका मेयर र उपमेयर उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ ।मेयर उम्मेदवार सर्वोत्तम डंगोल र उपमेयरकी उम्मेदवार सुशीला पौडेल दुबैको जमानत जफत भएको हो । डंगोलले ७ हजार ९ सय ६ मत ल्याएका थिए । पौडेलले १० हजार ४ सय ४८ मत ल्याएकी थिइन् ।
नियमअनुसार निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत पाउने उम्मेदवारको घरौटी जफत हुने प्रावधान छ । उता, महानगरपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख पद दाबी गर्दै उम्मेदवारी दिएका कतिपयले आफैंलाई समेत भोट नहालेको भेटिएको छ ।
वैशाख ३१ मा भएको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकासहित केही नगरपालिकाबाट प्रमुखमा उममेदवारी दिएका १६ जनाले मत नहालेका हुन् । उनीहरुले एक मतसमेत प्राप्त गर्न नसक्नुबाट उम्मेदवारले आफैंलाई भोट नहालेको प्रष्ट हुन्छ । प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनेका १४ जनाले आफ्नो मात्र एक मत पाएको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, जेष्ठ १६, २०७४ 7:14:12 AM